Me RASAMIMAKA MAHEFALAHY : TSY EKENTSIKA NY FANAPOTEHANA AN’I MADAGASIKARA – MyDago.com aime Madagascar
Ho anay ankolafy Ravalomanana any Toamasina hoy ny Cst Rasamimaka Mahefalahy , teny amin’ny Magro Behoririka androany di a mbola manohy ny tolona foana hatramin’izao. Tsy miomana fotsiny amin’ny fampodiana ny filoha Ravalomanana fa amin’ny fampandaniana azy ihany koa. Nambaran’ity olomboantendry avy any Toamasina ity ihany koa fa tao Toamasina I dia nisy ny mpikambana tao amin’ny Ceni-T fa notsohaina izany taty aorina kanefa tsy olana amintsika izany fa efa vonona isika. Tao Tanambao hoy izy, dia mbola manana olona isika dia ny ben’ny tanana rehetra dia zanak’i Dada. Variana ny tenanay hoy Rasamimaka, raha nandeha tany Ambatondrazaka fa ny olona any tsy mahalala afa-tsy ny filoha Ravalomanana ary miandry azy. Ny zava-misy tato ato tany an-toerana ihany koa hoy izy, dia nisy takela-by any orinasa Tiko tao Tanambao V. Tonga ny Colas hoy izy, saika hanala izany fa hoe hanaovan-dRajoelina fampielezan-kevitra. Saika matin’ny olona ireo mpiasan’ny Colas ireo. Rehefa niantso ireo ambaratongam-pahefana tany an-toerana ny tenanay hoy izy, dia nilaza ireo fa baiko avy any ambony. Midika ziany fa olon’ny frantsay no mampanao izany. Ny momba ny Ambatovy dia nambarany fa ny filoha Ravalomanana Marc, no niketrika io tetikasa io tamin’ny taona 2005. Amin’izao fotoana izao anefa hoy Rasamimaka , dia tonga tany Rajoelina. Tsy misy vola ny Fat ka io sy ny lalana no ataony hakana vola.Mihazakazaka ny frantsay amin’ny fanohanana ny Fat. Tsy zon’izy ireo ny manao fifanarahana amin’ny hevitr’olon-tokana toy izany. Tsy tomboantsoan’ny firenena no tanjon’izy ireo. Noho izany hoy ity mpanao politika ity, dia tsy ekentsika ny fanapotehana an’i Madagasikara sy ny ho avin’ny taranaka. Momba ny fahatongavan’ny iraky ny Sadc eto dia nilaza izy fa tsy hisy zavatra hanjary eto ao anatin’ny dimy andro. Enga anie hoy izy mba hilatsaka amin’izy ireo ny fanahy masina. Rehefa tsy mety ny ataon’ireo dia vonona Toamasina. Rehefa tapitra ny 60 andro hoy izy, dia ka fandrirarirana no eo dia tsy mijanona intsony isika fa tsy maintsy migidragidra.
Ny hery farany hanavotra an’i Madagasikara dia Ravalomanana
7 pensées sur “Me RASAMIMAKA MAHEFALAHY : TSY EKENTSIKA NY FANAPOTEHANA AN’I MADAGASIKARA”
9 octobre 2012 à 17 h 37 min
Raha tapitra ny 60j nefa i dada tsy mbola tafaverina dia mbola miandry foana ihany ve ny zanany nefa ny antokona tsy misy intsony
Me RASAMIMAKA marina ny anao ,
mba mila jerena koa ireo Paramed tsy mahazo karama ,ireo leaders hafa toa matory ,na ny gadra politika sns ….Tsy vitany e!
SANTE: le ministère de la santé publique a fait savoir que des paramédicaux désertent les centres de santé de base dans les régions Anosy et Androy à cause de l’insécurité. Ils organisent des allées et venues deux fois par semaine auprès des CSB pour prendre soin des patients.
Je pense que des ONG, des associations caritatives et la croix-rouge avec l’appui de l’OMS devraient élaborer un projet commun afin de faire face à une telle situation.
En réalité, on pourrait:
– se procurer des minibus 4×4 pour faire le ramassage des paramédicaux afin qu’ils s’acquittent de leurs tâches
– organiser une rotation des équipes paramédicales afin d’assurer une permanence suffisante
– solliciter l’appui des forces de l’ordre pour protéger les équipes concernées
– demander l’aide des institutions pré-citées dans le cadre des approvisionnements des matériels et des médicaments
– mettre en place un plan de communication dans le but de faire connaître les horaires d’ouvertures et de fermetures des CSB, le passage des spécialistes, les tours de garde des CSB, les soins offerts dans chaque CSB ainsi que les coordonnées géographiques des CSB dans les deux régions.
10 octobre 2012 à 4 h 27 min
Ka ilay gidra tpa tsy ho avy fa toa mankasitraka ny fitondran’i Rajoelina ny olona ka tsy mba te hihetsika na handrava izany. Ny tahotra moa dia efa mameno trano.
Aza hadino koa fa misy ireo mahery fo sy vonona hijoro hatr@ farany. Indrisy anefa fa raha mandresy ireo mahery fo irao dia ny Malagasy rehetrsa no ahazo ny tombotsoa fa tsy ny zanak’i Dada irery ihany, nefa ry zareo @ izao tsy mba sahy mihetsika fa mijerijery fotsiny. Miandry ny hafa hiasa eo @ toerany.
Ny fahatongavan’i Dr Simao eto dia efa tokony hanehoana hevitra mazava hoe , ianao ilay nitongilana sy nanamafy ny krizy misy eto aminay.. saingy ho sahy ve ny Malagasu hilaza izany ?
10 octobre 2012 à 8 h 27 min
Kamo be tenda toy ny mahazatra, dia faly mahazo (na zavatra maloto sy tsy fihinana) aza ê !
Faly mandray vonona, any ka lasa tena natao ho anarana aza ilay fomba fiteny ! Eo koa ireo faly mandrava ny efa vita ; raha tena ratsy moa maninona fa toa izay tsara indray no potehana ! Tsy izany ve ry zareo, ao amin’ny JIRAMA sy AIR MaLAD ???
Nankaiza daholo ireo mpiasa nilanja pankarta sy banderaola, ireo mpanohana an’ilay domelina tamin’ny 2009 ? Voky tsara dia matory daholo ?
Aoka ny resaka be. Tokana ny antso sy ny baiko mpitolomana:Fampitsaharana ny fitondrana Rajoelina no Namehana.
Aina no havotana .
Ny firenena no hafahana.
eo antanan’ny mpanjakana sy ny Jiolahy.
Hatsahatra @ fomba ahoana é!!???? an’azy dôlo zao ny hery Tafika; fitsaràna ka hanao inn????
Précédent Article précédent : HILARION : EFA AKAIKY HO VITA NY TOLONA
Suivant Article suivant : RAVELONANOSY MAMITIANA : MISY PAIPAIK’ADY IO FIFIDIANANA IO